War Deg Deg ah Qaraxyo ka kala dhacay degmooyinka cabdi sasiis iyo waabari oo qasaarooyin dhaliyey – STAR FM SOMALIA
War Deg Deg ah Qaraxyo ka kala dhacay degmooyinka cabdi sasiis iyo waabari oo qasaarooyin dhaliyey
Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa ku soo warameysa in gaariga qarxay uu ahaa mid la dhigay meel u dhow xarunta Gaadiidka Booliska, gaar ahaan afaafka hore maqaayad laga cuno cuntada fudud oo ka soo horjeeda Xarunta.
Lama oga qaraxan uu si toos loola dan lahaa xarunta gaadiidka Booliska iyo in gaariga uu qof lahaa oo waxyaabaha qarxa loogu xiray.
Hase ahaatee maqaayada uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa fariista Ciidamada Booliska oo ka qaxweeya, cuntada fududka ka cuna xilliyada subixii.
Dad goob joogayaal ah ayaa sheegaya in qaraxa uu geystay dhimasho iyo dhaawac, isla markaana ay ku jiraan askar ka tirsan Ciidanka Booliska.
Dhinaca kale waxaa daqiiqado ka hor iyana la sheegay in qarax uu ka dhacay agagaarka Dugsigii 21 October ee degmada Waabari, waxaana qaraxaas la sheegayaa inuu ka dhashay mootada loo yaqaano Bajaaj.
Qaraxyadan saaka ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa wali faah faahin rasmi ah laga heyn, mana jirto wax war ah oo ka soo baxay Laamaha ammaanka dowladda.
Dhaawaca Liibaan Madaxweyne oo la geeyay Magaalada Gaalkacyo